သင်ကသီးသန့်ပုဂ္ဂိုလ်လား သင်တရားဝင်အကြံဥာဏ်လိုအပ်ပါသလား။ သင်၏ဥပဒေရေးရာအနေအထားကိုရှင်းလင်းစွာသိလိုပါသလား။ ပြီးရင်မင်းကနေရာမှန်မှာရောက်နေပြီ။ Law & More Case Scan ဖြင့်ဥပဒေအကြံဥာဏ်ဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့မှတင်ပြသောမေးခွန်း၏နောက်ခံအခြေအနေကိုစစ်ဆေးခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မည်သည့်နေရာတွင်စီစဉ်ထားပြီးဖြစ်သည်၊ အဘယ်အရာရှိနေသေးသည်၊ စိတ်ဝင်စားသည့်နေရာများတည်ရှိပြီးမည်သည့်ဖြေရှင်းနည်းများဖြစ်နိုင်သည်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားသည်။ တာ ၀ န်တစ်ခုချင်းစီသည်သူ့ဘာသာရပ်တည်။ သင့်တော်သောချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုပေးသည်။ သင်၏ဥပဒေရေးရာကျွမ်းကျင်သူအားစစ်ဆေးခြင်းသည်သင့်အတွက်အလွန်အကျိုးရှိသည်။
အွန်လိုင်းလျှောက်လွှာပုံစံကိုအသုံးပြုပြီး Case Scan အတွက်တောင်းဆိုမှုကိုသင်တင်ပြသည်။ တောင်းဆိုမှုကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်သင့်အားဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်ပါမည်။ နှစ် ဦး နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်သဘောတူညီမှုရယူပြီးတာ ၀ န်ယူမှုသဘောတူညီချက်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးနောက် Case Scan ဖြင့်စတင်ပါမည်။ သက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များနှင့်ဥပဒေရေးရာရင်းမြစ်များကို အခြေခံ၍ ဥပဒေရေးရာအခြေအနေနှင့်အန္တရာယ်များကိုစနစ်တကျစိစစ်လိမ့်မည်။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေ့လာပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြံဥာဏ်များသည်အကြံဥာဏ်မည်သို့ဖြစ်ပေါ်လာသည်ကိုထိုးထွင်းသိမြင်စေသည့်စာဖြင့်ရေးသားထားသောအကြံဥာဏ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ရေးဆွဲသည်။ ၎င်းသည်ဖြစ်နိုင်ခြေများကိုဆွေးနွေးပြီးအောင်မြင်မှုနှုန်းကိုအကဲဖြတ်သည်။ Case Scan ၏ရလဒ်သည်စာမျက်နှာ ၂ မျက်နှာမှ ၄ မျက်နှာအထိပါသောအစီရင်ခံစာကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဤအကြံပေးချက်ကိုနားလည်နိုင်သောဘာသာစကားဖြင့်ရေးသား။ လက်တွေ့ကျကျအသုံးပြုနိုင်ပြီးတိုက်ရိုက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ Case Scan ကို အခြေခံ၍ သင်မည်သည့်လုပ်ဆောင်မှုများကိုပြုလုပ်သည်နှင့်မည်သည့်အန္တရာယ်များကိုသင်ဖယ်ရှားရန်သို့မဟုတ်ဖြစ်နိုင်သမျှကန့်သတ်ရန်ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။
Law & More Case Scan အတွက်တောင်းဆိုမှုကိုပေးရန်တာဝန်မရှိပါ။ အချို့သောအခြေအနေများတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဥပမာကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုနယ်ပယ်မှမဟုတ်လျှင် Case Scan ကိုပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ငြင်းဆန်နိုင်သည်။
အဆင့်ဆင့်အစီအစဉ် - တစ်ပတ်အတွင်းသင်၏စကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှု
လက်ခံမှုတာ ၀ န်
စာရင်းပြီးနောက်, ငါတို့သည်သင်တယ်လီဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်ပါလိမ့်မယ်။ စကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှုကိုသဘောတူညီမှုတစ်ခုအနေဖြင့်စတင်လုပ်ဆောင်သည်။ Law & More Case Scan အတွက်တောင်းဆိုမှုတိုင်းကိုပေးရန်တာဝန်မရှိပါ
အခြေအနေကိုသက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များနှင့်တရားဝင်ရင်းမြစ်များပေါ် အခြေခံ၍ မြေပုံထုတ်ပြီးသင်အကြံပေးအစီရင်ခံစာရရှိလိမ့်မည်
“ အဆက်အသွယ် Law & More အလွန်အပြုသဘောဆောင်ပြီးအစကတည်းကအလွန်ပညာရှင်ဆန်ခဲ့သည်
Case Scan တွင်သတ်မှတ်ထားသောနှုန်းထား၊ ရှင်းလင်းပြတ်သားသောအဆိုပြုချက်နှင့်အမှာစာအတည်ပြုခြင်းတို့ရှိသည်။ သင်လှုပ်ရှားမှုများ၏စျေးနှုန်းအတိအကျကိုသင်တို့သိကြ၏ Law & More မင်းအတွက်လုပ်ဆောင်တယ် Case Scan အတွက်အခကြေးငွေမှာ ၂၁% VAT မပါတစ်နာရီလျှင်ယူရို ၇၅၀ ဖြစ်သည်။
ကျေးဇူးပြုပြီးမှတ်သားထားပါ! Law & More ဥပဒေရေးရာအကူအညီကောင်စီ၏အသင်းဝင်မဟုတ်ပါ၊ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ထောက်ပံ့သောတရားဝင်အကူအညီများကိုသင်ရရှိရန်အခွင့်အရေးမရှိပါ။
ပိုမိုရှုပ်ထွေးသောသို့မဟုတ်ကျယ်ပြန့်သောစကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှုအတွက်အပိုဆောင်းအခကြေးငွေသက်ရောက်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်, နှုန်းကိုသင်ကြိုတင်သဘောတူညီခဲ့ပါလိမ့်မည်။
သင့်အားအကြံဥာဏ်များလျှောက်ရန်နှင့်သင်လိုအပ်သောအရေးယူမှုများပြုလုပ်ရန်သင့်အားကူညီပေးပါသည်။ ဟုတ်ပါတယ်, သင် Scan ၏ရလဒ်အဖြစ်သင်နောက်ထပ်ခြေလှမ်းကိုယူရန်တာဝန်ရှိသည်မဟုတ်ပါ။ Case Scan မှထွက်ပေါ်လာသောဖြစ်နိုင်သည့်နောက်ဆက်တွဲလုပ်ဆောင်မှုများ - သင်ဆန္ဒရှိလျှင် - နောက်ဆက်တွဲတာဝန်တစ်ခုတွင်ပါလိမ့်မည်။
Case Scan သည်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သာဖြစ်ပြီး၎င်းမှမည်သည့်အခွင့်အရေးကိုမျှတောင်းဆိုခွင့်မပြုနိုင်ကြောင်းသတိပြုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ယေဘုယျစည်းကမ်းချက်များနှင့်အခြေအနေများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်သက်ဆိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရှင်တစ် ဦး ဖြစ်ပြီးသင်၌တရား ၀ င်ပြissueနာတစ်ခုရှိပါကအခြား ၀ န်ဆောင်မှုပုံစံတစ်မျိုး၌သင့်အားကျွန်ုပ်တို့ကူညီပေးပါမည်။ သင့်မှာမေးစရာမေးခွန်းများရှိလား။ ကျေးဇူးပြု၍ ရှေ့နေများနှင့်ဆက်သွယ်ပါ Law & More.
mr. Maxim Hodak, advocate at & More – maxim.[အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]